Ireo distrika vitsivitsy manodidina ihany no voajery, fa adino ny distrika sasany izay tena misy olona sahirana toa an’i Manjakandriana, Andramasina, Ankazobe, Anjozorobe,… hoy ny fitarainana. Samy nasaina nihiboka sy nikatso ny asa fivelomana, ary i Manjakandriana aza dia toerana nahitana trangana covid-19 sy nisiana olona maty mihitsy, hoy ny fanamarihana. Ny any amin’ny toerana tsy nisy coronavirus aza mahazo ny anjarany, ka mba jereo izahay, hoy ny antso avo. Zary lasa miandrandra ity fanampiana hanaovan’ny fanjakana fampisehoana etsy sy eroa ity ny vahoaka amin’izao fotoana izao. Miharihary anefa, fa tsy ny Malagasy rehetra no misitraka ka misy ny mahatsapa fa atao anjorom-bala, kanefa ny fanampiana sy ny trosa dia amin’ny anaran’ny Malagasy. Tena io tokoa ve anefa no vahaolana mahomby sy maharitra eo anatrehan’ny olana ankehitriny.